Quality Control - Kechengyi Environmental Protection uye Electric Power Technology Co., LTD.
Mufambiro yepamusoro kuzvidzora mabasa maererano QG / ZZ 01-2011 zvinodiwa uye pachishandiswa yokuzvininipisa / kwezvakatipoteredza Chinyorwa.
Quality kuzvidzora nzira:
1. magadzirirwo dhipatimendi uye technologie achava anokonzera rakarurama mufananidzo, kugadzira muitiro uye tichiswedera shanduko kuonana papepa. Uye pamberi firimu, kurimwa nomuzongoza, unhu kudzora vatariri kugadzira madhipatimendi vachava rwokugadzira background.
2. Pamazita compilers anofanira kuronga mazita nezvinhu maererano mufananidzo uye kugadzira muitiro, kuti mazita nezvinhu, kuti uwandu, kuti mumagwa list, uye basa rayo kururama. The nhengo zvinofanira akochonorwa uye prefabricated zvinofanira akakurukura kugadzira dhipatimendi pachine kuitira kudzivisa tsvina kana basa splicing.
3, mukugadzira dhipatimendi ndiye anokonzera okudhindira maererano akagadzira vanodhirowa, kugadzira pezvakaitwa, ano mamiriro uye kugadzirwa mazita kuti zvinhu nokugamuchira kusvika chigadzirwa kugadzira basa nzendo azoshandiswa kuzvipira rokuongorora, yakawiriranwa Kuongorora, uye kunyanya basa.
4, unhu kudzora dhipatimendi ndiye anokonzera kutenga dhipatimendi zvokuvakisa pamusoro pakugadzira zvinhu, workshop kubudisa Semi-dzapedza zvinhu uye vakaipedza zvigadzirwa rokuongorora, vaongorori kunyora unhu data, muitiro unhu mamiriro uye pasi nenguva kupedziswa rekushanyirwa zvinyorwa; Gwaro inounganidzwa otumirwa pamwe kutumirwa kuurongwa installation nzvimbo